トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Hubi feature-caado qowladda pachinko [Hawlgallada Rom ruxruxo]
Hit ahaa, waxaa wavers u dhexeeya rajo iyo cabsi oo uusan ka dhacay iyo sidoo, waxaan u malaynayaa in ay tahay pachinko raaxaysi dhabta ah. Si kastaba ha ahaatee, marka hit waa, in qaar ka mid ah wax in la xidhiidhaa Chang, marka ha ku dhuftay in aad aan la weeraray oo dhan, waxaa laga yaabaa in dadka qaar ka mid ah kuwaas oo aan u maleeyay in waxa uu noqon lahaa sababta. In
, oo aan ku dhuftay hit, oo ka hadlaya halka iyo sida waa go'an yahay, in mid ka mid ah mid ka mid ah mashiinka pachinko ah, aad qayb ka mid ah ROM in la geliyo. ROM iyo waa in la Ghanna bakhtiyaa, mishiinka barnaamijka ama qaybta si loo xaqiijiyo hit ah, waxaa dhaafiyay. Waa in mashiinka pachinko waxyaalaha qalbiga ku jira ka. Haddii tusaale ahaan
in la yidhaahdo, bakhtiyaa Ghanna pachinko waa sida roulette ah, hal wareeg ku dhawaad ??hal roulette ah, isku day in aad ka fekeri in halkii Xaqiijisay haddii rido Ghanna ah. Waa, waxaan u malaynayaa in ay fududahay in la fahmo ka fiirsaneysa in la fuliyay in ROM ah. ROM joogtada ah waa, siday suuragal u ah ee ku dhacdo hit weyn wuxuu noqon doonaa jaaniska hit weyn ee mashiinka pachinko ah.
waxa loo yaqaan ROM ka dib waa, Uchikata sida in la go'aansaday, waxay ahayd in laga jaraa halkii fudud, ayaa sheegay in ROM sharci-darrada ah. Si kastaba ha ahaatee, inta badan qowladda pachinko ah, sidaas darteed waxaan ka hawlgalaan hadhaagii ROM joogto yimid ka soo saaraha, laakiin wakhtigan, waxaan jeclaan lahaa in aad eegto akhriyey caado ROM joogto ah.
ROM joogto ah, waxaan doonayaa in aan ku biiro itimaalka Ghanna wadada. Haddii mid ka mid ah jaaniska ah 340 daqiiqo, ka dhacay maalintii, ku cel-celinta maalinta aadan ku dhacay, oo aad wax ay isku dayaan in ay isugu dhow in jaaniska. In Tusaale ahaan, haddii ay jiraan wax yar oo maalmo ah halkii, sababtoo ah waxa ay isku dayaysa in ay u guuraan jidadka itimaalka, oo soo baxay hal mar. Tani waa waxa la sheegay in la ruxruxo ee Ghanna, waa sababta oo ah in si lama filaan ah u heshay ama ejection. Oo
, soo noqnoqda ama aan ka bixin, waxa ay ku saabsan oo ku saabsan bil, ayaa la sheegay in aad isugu in jaaniska Ghanna wadada. Si aad u akhriso ruxruxo ee bisha waa, waa in Read caado ka ROM joogto ah. Dooro model ah in ay ka walwalsan tahay, iyada oo qowladda pachinko maalin kasta ah, ma ka soo baxay maalintii waxaa xigay intii maalmo badan ah, in heerkee Dhanka of aragti, ama agagaarka waxa mar waa in la kala bixiyo kubad ka soo baxay, Waxaan qaadan doonaa xogta siman.
, oo ay sii wadaan dhawr bilood, ruxruxo ah ee miiska, sharciga waxa loogu yeero oo idinka mid ah arki doonaa. In waqti wanaagsan oo la ruxruxo, haddii maalgelinta, waxaa loola jeedaa in guusha boqolkiiba ay u badan tahay in ay ku kici. In pachinko ah, waxa aanu u leeyihiin kala ah mashiinka aasaasiga ah. Launch kubada waa sababta oo ah ma ka dhigan tahay in aad ku guuleysato 100%. Si kastaba ha ahaatee, in qowladda pachinko a, u saaray heerka qiimaha talooyin iyo meelmarin ah, xog ah in kala mishiinka soo bixi doonaan sida qiimaha tirsi waxaa si toos ah loo xisaabiyaa maalin kasta. maanta
, waxa boqolkiiba ka soo baxay waxaa ka mid ah, haddii ganacsi la dhammeeyo, waxaan si degdeg ah u ogaadaan. In tii pachinko
, in waa diyaar u ah inay sameeyaan in mishiinka, waxaa loo gudbin doonaa ilaa xad gaar ah ku qaadeen in madaxa layga. Saas ma aha, aad samir midna u baahan tahay awoodaha dhawrid, laakiin ma aha xataa macnaheedu ma jiro garantii hubaal baxay. Wax kasta oo aan fikir, ka badan sii Faydno waxa soo baxay, waxaan u malaynayaa waxaa ka wanaagsan in ay aaminsan yihiin in xad in guusha boqolkiiba kordhay. ROM waa, maxaa yeelay, waxaa ku jira oo dhan mishiinka pachinko miiska, haddii aad xiisaynayso, fadlan isku day in aad ka doodid.
halka iyada oo caado ka
Horukon arko, waa inaad awooddaa in ay jiid guusha la itimaalka sare si ay u noqdaan karin xataa wada akhri hirarka ROM. Waxaa falaa. Wax kasta oo aan fikir, ka badan sii Faydno waxa soo baxay, waxaan u malaynayaa waxaa ka wanaagsan in ay aaminsan yihiin in xad in guusha boqolkiiba kordhay. ROM waa, maxaa yeelay, waxaa ku jira oo dhan mishiinka pachinko miiska, haddii aad xiisaynayso, fadlan isku day in aad ka doodid.
Horukon arko, waa inaad awooddaa in ay jiid guusha la itimaalka sare si ay u noqdaan karin xataa wada akhri hirarka ROM.